लोकबहादुरको त्यो चलाखीपूर्ण अन्तरवार्ता : ला’श देखेपछि आतेश लागेर चि’च्याएँ ! – Dailny NpNews
लोकबहादुरको त्यो चलाखीपूर्ण अन्तरवार्ता : ला’श देखेपछि आतेश लागेर चि’च्याएँ !
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २८, २०७८ समय: ११:२०:१३
काठमाडौं । यदि तपाईंले सस्पेन्स थ्रिलर फिल्महरू हेर्ने गर्नुभएको भए थाहा होला, तिनीहरूमा प्रायः सबैभन्दा कम शं’का गरिएको व्यक्ति नै अन्त्यमा अप’राधि ठहर्छ।जो मुख्य अप’राधी हो, उसलाई नै कथामा सबैभन्दा निर्दोषका रूपमा पेस गरिन्छ ताकि दर्शकले अनुमानै नगरुन् । संखुवासभामा भएको सामूहिक ह,त्या का’ण्डमा मुख्य अभियुक्तले ठीक यस्तै शैलीमा आफूलाई पेस गरेका थिए ।
यतिठूलो अप’राध रचिसकेपछि पनि उनले लु’क्ने वा भा’ग्ने चेष्टा गरेनन्। बरु नि’र्धक्क मिडियालाई अन्तरवार्ता दिए, अनि प्रहरीलाई भुलभुलैयामा पार्न अनुसन्धानलाई सघाएको नाटक पनि गरे। घटना लगत्तै लोकबहादुरले आफूलाई ‘पहिलो प्रत्यक्षदर्शी’ का रूपमा उभ्याएका थिए । ‘उमंग टिभी’ नामक यु’ट्युव च्यानलले घटनाको विषयमा उनीसँग अन्तरवार्ता गरेको थियो, जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
अन्तरवार्तामा लोकबहादुर शंकै नलाग्ने गरी बडो निर्दोष भावमा पेस भएका छन्। घटनापछि ड’र-त्रा’सले गर्दा आफूहरू राम्ररी निदाउन नसकेको बताउँछन् उनी। आफैंले चि’र्पटले हानेर मा,रेका तेजबहादुरलाई ‘मिलनसार र सहयोगी स्वभावको व्यक्ति’का रूपमा चित्रण पनि गर्छन् । अन्तरवार्तामा उनले बडाउको ला’श देखेपछि आफू आ’तेश लागेर चि’च्याएको बताएका छन् ।
लोकबहादुरलाई सोधिन्छ, ‘पैसाको लागि कि रिसइबीले मा,रिएको जस्तो लाग्छ ?’ शुरूमा उनी पैसाकै लागि मा,रिएको आशं’का व्यक्त गर्छन् । ‘उहाँहरूको कसैसँग रिसइबी थिएन । पैसाकै लागि हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भनेका छन् । फेरि प्रहरीले पैसा र गरगहना घरमै भेटाएको पत्रकारले बताएपछि उनी भन्छन्, ‘अँ, पैसाको लागि होइन कि जस्तो पनि लाग्छ । यो घटना ग’म्भीर छ ।’ उनले भनेका छन् ।